Imigaqo yoyilo lwegraphic | Abadali be-Intanethi
Imigaqo yoyilo lwegraphic
Encarni Arcoya | | Idizayini yeMifanekiso
Ngaba ukhe weva ngemigaqo yoyilo lwegraphic? Ezi zifana nohlobo lwemithetho ukuba nayiphi na ingcali ezinikele kuyilo lwegraphic kufuneka ilandele kuzo zonke iiprojekthi zabo. Kodwa ngaba uyazi ukuba ziyintoni na?
Ukuba awuzange uve ngazo, okanye uzilibele ezinye, ngoko siza ndikuxelele ngazo zonke ezikhoyo kwaye kufuneka uhlale uziqaqambisa kwiiprojekthi zakho.
1 Ivela phi imigaqo yoyilo lwegraphic?
2 Kwaye yeyiphi loo migaqo yoyilo lwegraphic?
2.6 Indawo engenanto
3 Zisetyenziswa njani
Ivela phi imigaqo yoyilo lwegraphic?
Kuya kufuneka uyazi loo nto imigaqo yoyilo lwegraphic asiyonto eye yaqanjwa. Banjalo ngokwenene ngokusekelwe kwimithetho ye-13 yeGestalt owamisela ukuba loo manqaku ali-13 ngawona abalulekileyo kunye nalawo aqulunqa oko kubizwa ngokuba yimigaqo yokuqonda komntu.
Bazama ngokusisiseko ukuseka yonke into esiyibonayo ngokubonakalayo. Ngesi sizathu imigaqo yoyilo lwegraphic isekwe kwezi.
Kwaye yeyiphi loo migaqo yoyilo lwegraphic?
Kwiimpapasho ezahlukeneyo basixelela ukuba zintandathu. Abanye bathetha ngemigaqo esixhenxe. Apha sichaza ngokweenkcukacha into abayiyo.
Siqala ngomgaqo ovumela ukuba umbhalo, kunye nalo lonke uyilo, ubukeke uchanekileyo kwaye ufanelekile. Ngamanye amazwi, ilungelelanisiwe.
Ngale ndlela, into esiyifumanayo kukugcina ucwangco phakathi kwezinto, kwangaxeshanye isivumela ukuba sizidibanise ukuze zibukeke ngathi zibanye.
Kuba ngathi babenomgca obadibanisayo kwaye, ngolungelelwaniso, oku kwaphunyezwa.
Umzekelo ngowokuba silungelelanisa yonke into ngasekhohlo nasekunene, okanye ukuba silungelelanisa kumbindi sisenza uyilo lubonakale lugqame kwiprojekthi ngelixa ezinye izinto ezisemacaleni zinika ubunzulu (ngaloo ndlela idala isiphumo se-3D).
Kuyilo lwegraphic, ibhalansi ayikuko ukuba ubeke izinto ezifanayo emacaleni ukuze zibukeke zifana, kuthetha ukuba kufuneka ulawule "ubunzima obubonakalayo". Oko kukuthi, kufuneka udale ibhalansi xa iyonke.
Xa uyifumene, abasebenzisi baya kuba nakho ukugxila kumbono wabo kumanqaku owafunayo, kwezo uzinike ukubaluleka ngakumbi ngaphandle kokuba kubonakale ngathi ubeka phambili indawo enye ngaphezulu kwenye. Ukongeza, iyakwazi ukuvuselela iimvakalelo.
Umzekelo woku inokuba xa sibeka ezinye izinto ekhohlo nasekunene, kufuneka ubeke into yokubuyekeza (kwaye amehlo awayi ngasekhohlo kuphela, kodwa ucamngce ngalo lonke uyilo).
Ugxininiso lunokuchazwa ngolo hlobo inxalenye yoyilo esifuna ukuba yi-protagonist yalo lonke. Umzekelo, ukuba ufuna ukwenza ipowusta yomboniso weencwadi, yintoni ekufuneka ibalasele ngakumbi yincwadi, ibhinqa elifundayo, indoda ejonge kwivenkile yeencwadi ... Kodwa iincwadi zizinto ezifanele ukutsala ingqalelo.
Isenokuba sisihloko saloo powusta. Igama lomboniso, okanye umhla kunye nendawo oya kubanjelwa kuyo.
Ngomahluko ungafumana ukuqaqambisa inxalenye yoyilo, oko kukuthi, ukuphumeza into ebethayo, ethi itsalise umsebenzisi xa eyibona. Inokuba ngumfanekiso, isicatshulwa, i-typography okanye enye into.
Eyona nto ixhaphakileyo kukusebenzisa ukuchasana kombala ukuvumela ukwahlula kwaye kwangaxeshanye ugxininise.
Umzekelo, khawufane ucinge ukuba kufuneka wenze ipowusta ngemibala ezuba. Ukuba uyibeka ngolu hlobo awuyi kufezekisa naluphi na ulwahlulo kwaye, ngenxa yemibala, inokuthi ingabonakali. Ngoku khawube nomfanekiso-ngqondweni wepowusta enye eblowu kodwa enezinto ezithile ezimhlophe nezityheli. Yintoni ongayikhankanya ngakumbi? Ewe, nantso into enokuba yiyo umahluko.
Ngomlinganiselo kufuneka uqonde i ubungakanani obubonakalayo kunye nobunzima bezinto ozisebenzisileyo kuyilo. Oko kukuthi, ngeseti epheleleyo yeziqalelo ukwazi ukuba zikhulu kakhulu, ukuba zincinci kakhulu, okanye zigcwele kakhulu.
Xa zonke izinto zibubukhulu obuchanekileyo kunye nendawo echanekileyo, ngoko umlinganiselo kuthiwa uchanekile. Unako ngokwenene ukufezekisa oku ngokulungelelanisa kunye nokulinganisela.
Xa usenza uyilo, into ongenakuyicinga kukuba kufuneka ugcwalise yonke into. Kukwayimfuneko ukuba nayo izithuba ezingenanto, ezikwabizwa ngokuba zizithuba ezilandulayo. Ngoba? Kuba ivumela umsebenzi ukuba "uphefumle", ukuze ungabonakali unzima kakhulu.
Kwimeko apho awukwazi, eso sithuba singenanto sisetyenziselwa ukudala umbutho kunye noluhlu lwezikhundla. Kufana nokuba uxelela abo babona uyilo apho kufuneka ugxininise kwaye apho unokuphumla khona.
Musa ukucinga ukuba ukuphindaphinda akulunganga. Ngamanye amaxesha kuyimfuneko kuphephe ukulayisha kakhulu uyilo. Ngokuqhelekileyo oku kwenzeka ngemibala okanye iifonti, nangona inokuba njalo ngemifanekiso.
Kakade ke, musa ukuphindaphinda kakubi. Kufuneka uyibone njengento eya kuqinisa ukuqatshelwa kwe-brand, i-element, imveliso, njl.
Lo mgaqo awusoloko usetyenziswa, kodwa abo banobuchule kuwo benza nayiphi na iprojekthi ibonakale iphila. Kwaye oko kubaluleke kakhulu kuba kuya kwenza nabani na oyibonayo angakwazi ukujonga kude.
Kodwa ukufumana intshukumo kufuneka wenze zonke izinto zihambelane kwaye ngexesha elifanayo benza umphumo obonakalayo obonakala uhamba. Ukwenza oku, akufanele usebenze kuphela kunye nayo, kodwa kunye nokulinganisela, ukuchasana kunye nokulungelelaniswa.
Awuyi kuhlala ukwazi ukuyifeza, kodwa kwiipowusta zomculo, okanye ezo zemisebenzi "eshukumisiweyo", unokuhlala uzama ukwenza le mpembelelo.
Ngoku ukuba uyayazi imigaqo yoyilo lwegraphic, kuya kufuneka uyazi loo nto iiprojekthi akufuneki zilandele yonke imigaqo kwileta. Ngokuqhelekileyo, i-1-2 yazo ihoywa ukuphumeza umphumo onomdla. Into ekufuneka ucacelwe ngayo kukuba lonke uyilo kufuneka lunxibelelane. Ukuba uphulukene naloo nto, nokuba ucinga ukuba ilungile kangakanani na, ayizukwenza nto ingako.
Kwakhona, Ukuba usaqala nje, akucebisi ukuba ungayihoyi le mithetho. Kufuneka uqale ufunde ukuzisebenzisa ngokuchanekileyo ukuze, ngamava, wazi ukuba ungafikelela kangakanani na ekukwazini ukuzitsiba.
Ngaba imigaqo yoyilo lomzobo icacile kuwe?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Imigaqo yoyilo lwegraphic
Ezona fonti zisi-8 ziBalaseleyo zokuchwetheza